ဟာရူကီ မူရာကာမီ | လမ်းအိုလေး | Page 2
Tag Archives: ဟာရူကီ မူရာကာမီ
သားပိုက်ကောင်ရုံသို့ အလည်သွားခြင်း (သန်းထိုက်စိုး)
လိုက်ကာတွေ ဆွဲဖယ်ပြီး အပြင်လောကကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့ ဤနေ့သည် သားပိုက်ကောင်လေးဆီ သွားလည်ဖို့ အကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်ကြောင်း နှစ်ယောက်လုံး သိလိုက်ကြသည်။ နေက သာနေသည်။ ရာသီဥတုက ကြည်လင်နေသည်။ လမ်းပေါ်မှာ ဗွက်တွေလည်း မရှိတော့။
ဘာသာပြန် – သန်းထိုက်စိုး
Categories: Prose, Short Stories | Tags: ဘာသာပြန်, သန်းထိုက်စိုး, ဟာရူကီ မူရာကာမီ, ၀တ္ထုတို, Haruki Murakami, lanolay, Short Stories | Permalink.
… ကြိမ်ဖန်များစွာ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်တွေကို အမှောင်ထုထဲကို မြှောက်စမ်းကြည့်ပေမယ့် ကျွန်တော့် လက်ချောင်းတွေက ဘာကိုမှ စမ်းလို့မမိ။ အဲဒီ အလင်းစက်ကလေးဟာ ကျွန်တော် လက်လှမ်းမမှီတဲ့ နေရာမှာပဲ အမြဲ ရှိနေခဲ့တော့တယ် …
ဘာသာပြန် – ဒီနိုဗို | Mirrored from: ဒီနိုဗို
Categories: Prose, Short Stories | Tags: ဒီနိုဗို, ဘာသာပြန်, ဟာရူကီ မူရာကာမီ, ၀တ္ထုတို, Denovo, Haruki Murakami, lanolay, Short Stories | Permalink.
Categories: Prose, Short Stories | Tags: ဘာသာပြန်, လင်းတည်ဦး, ဟာရူကီ မူရာကာမီ, ၀တ္ထုတို, Haruki Murakami, lanolay, Lin Ti Oo, Short Stories | Permalink.
တောင်တက်ဘောင်းဘီတိုလေး တစ်ထည် (မြတ်သစ်)
April 29, 2013 by lanolay	Leaveacomment
မေမေဟာ အဲဒီလူကိုကြည့်ရင်း သူ့စိတ်ထဲမှာ မရှင်းမလင်း ဖြစ်နေတဲ့၊ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းကိစ္စတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုသလို ရှင်းလင်းပီပြင်လာတော့တယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ဖေဖေ့ကို မုန်းတီးနေတယ်ဆိုတာ နားလည်သဘောပေါက်လာတာပါပဲ
Categories: Prose, Short Stories | Tags: ဘာသာပြန်, ဟာရူကီ မူရာကာမီ, မြတ်သစ်, ၀တ္ထုတို, Haruki Murakami, lanolay, Short Stories | Permalink.